Sɛnea Yɛbɔ Onyankopɔn Mpae
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Ateso Attié Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Betsimisaraka (Southern) Bislama Bolivian Sign Language Boulou Bété Cambodian Chavacano Chichewa Chin (Tiddim) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chopi Chuabo Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Cuban Sign Language Damara Dangme Douala Drehu Dusun Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Fijian Fon French Ga Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hindi Hunsrik Iban Ibinda Igbo Indian Sign Language Indonesian Irish Javanese Jula Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Meru Moore Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Nigerian Pidgin Nyungwe Nzema Okpe Oromo Otetela Pidgin (Cameroon) Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Seychelles Creole Sidama Silozi Sinhala Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tongan Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vezo Vietnamese Wallisian Wolaita Yacouba Zande Zulu
Mpaebɔ Yɛ Hokwan Kɛse
“Ɔsoro ne asase Yɛfo” no ani gye ho sɛ obetie yɛn mpaebɔ.​—Dwom 115:15
1, 2. Adɛn nti na mpaebɔ yɛ hokwan kɛse? Adɛn nti na ehia sɛ yehu nea Bible ka fa mpaebɔ ho?
YƐDE yɛn asase yi toto nsoromma a egu wim ho a, asase sua koraa. Sɛ Yehowa to n’ani hwɛ asase so a, ohu amanaman nyinaa sɛ bokiti mu nsuko baako. (Dwom 115:15; Yesaia 40:15) Ɛwom, onipa so sɛ dɛn mpo a, ne kɛse nnu nsoromma a egu wim ho hwee, nanso Dwom 145:18, 19 ka sɛ: “Yehowa bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa, wɔn a wɔfrɛ no nokwaredi mu no. Ɔbɛyɛ wɔn a wosuro no no apɛde ama wɔn, na obetie wɔn sufrɛ na wagye wɔn.” Hwɛ hokwan kɛse a yɛwɔ! Ade nyinaa so Tumfoɔ Yehowa pɛ sɛ ɔbɛn yɛn, na ɔpɛ sɛ otie yɛn mpaebɔ. Anokwa, mpaebɔ yɛ hokwan kɛse a Yehowa de adom yɛn mu biara.
2 Nanso sɛ Yehowa betie yɛn mpaebɔ a, gye sɛ yɛbɔ mpae no sɛnea ɔpɛ. Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa? Ma yɛnhwɛ nea Bible ka fa mpaebɔ ho.
ADƐN NTI NA ƐSƐ SƐ YƐBƆ YEHOWA MPAE?
3. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ Yehowa mpae?
3 Yehowa pɛ sɛ wobɔ no mpae, anaa wo ne no kasa. Yɛyɛ dɛn hu saa? Yɛsrɛ wo kenkan Filipifo 4:6, 7. Wo deɛ, dwen asɛm a ɛka koma yi ho hwɛ. Ɔsoro ne asase Wura no dwen wo ho, na ɔpɛ sɛ woka nea ɛhaw wo ne abɛbrɛsɛ a worefa mu kyerɛ no.
4. Sɛ yɛtaa bɔ mpae a, ɛbɛka yɛne Yehowa adamfofa sɛn?
4 Mpaebɔ ma yetumi ne Yehowa fa adamfo a emu yɛ den. Sɛ nnamfo taa bɔ nkɔmmɔ ma obiara hu ne yɔnko tirim asɛm ne ne haw a, ɛma adamfofa no mu yɛ den. Saa ara na mpaebɔ te; ɛma yɛne Yehowa adamfofa mu yɛ den. Yehowa pɛ sɛ wuhu n’adwene ne n’apɛde, enti waka ho asɛm wɔ Bible mu. Nea ɔbɛyɛ daakye nso ɔmfa nsiee wo; waka ho asɛm wɔ Bible mu. Wubetumi aka wo komam asɛm akyerɛ no daa. Woyɛ saa a, wo ne Yehowa adamfofa mu bɛyɛ den paa.—Yakobo 4:8.
YƐPƐ SƐ ONYANKOPƆN TIE YƐN A, DƐN NA ƐSƐ SƐ YƐYƐ?
5. Yɛyɛ dɛn hu sɛ ɛnyɛ mpaebɔ nyinaa na Yehowa tie?
5 Mpaebɔ nyinaa na Yehowa tie? Dabi. Odiyifo Yesaia bere so no, Yehowa ka kyerɛɛ Israelfo sɛ: “Mo mpae dodow no nyinaa mintie, efisɛ mogya ayɛ mo nsa mãmã.” (Yesaia 1:15) Wei kyerɛ sɛ yɛanhwɛ yiye a, yebetumi ayɛ nneɛma bi a ɛbɛsɛe yɛne Yehowa ntam, na ɔrentie yɛn mpaebɔ.
6. Adɛn nti na gyidi ho hia saa? Dɛn na woyɛ a, ɛbɛkyerɛ sɛ wowɔ gyidi?
6 Sɛ yɛpɛ sɛ Yehowa tie yɛn mpaebɔ a, ɛsɛ sɛ yenya ne mu gyidi. (Marko 11:24) Ɔsomafo Paulo kyerɛɛ mu sɛ: “Gyidi nni hɔ a, obi ntumi nsɔ Onyankopɔn ani, efisɛ ɛsɛ sɛ nea ɔba ne nkyɛn no gye di sɛ ɔwɔ hɔ, na ɔyɛ wɔn a wɔn ani abere rehwehwɛ no no katuafo.” (Hebrifo 11:6) Nanso ɛnnɔɔso sɛ yɛde yɛn ano bɛka kɛkɛ sɛ yɛwɔ gyidi. Ade a yɛde bɛkyerɛ sɛ yɛwɔ gyidi paa ne sɛ yebetie Yehowa daa.—Kenkan Yakobo 2:26.
7. (a) Sɛ yɛrebɔ mpae a, adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛda ahobrɛase ne obu adi kyerɛ Yehowa? (b) Dɛn na yɛyɛ a ɛbɛkyerɛ sɛ yefi yɛn komam na ɛrebɔ mpae?
7 Sɛ yɛrebɔ mpae a, ɛsɛ sɛ yɛde ahobrɛase ne obu ne Yehowa kasa. Adɛn ntia? Sɛ yɛrekɔ ɔhene anaa onipa kɛse bi anim a, yɛn kasa mpo ma ɛda adi sɛ yebu no. Yehowa ne ade nyinaa so Tumfoɔ, enti wunnye ntom sɛ yɛne no rekasa a, ɛsɛ sɛ yɛda obu ne ahobrɛase adi? (Genesis 17:1; Dwom 138:6) Bio nso yɛrebɔ mpae a, ɛnsɛ sɛ yɛfa asɛm baako na daa ɛno ara na yɛka. Mmom ɛsɛ sɛ yɛka yɛn komam asɛm kyerɛ Yehowa.—Mateo 6:7, 8.
8. Sɛ yɛbɔ biribi ho mpae a, dɛn na ehia sɛ yɛyɛ ka ho?
8 Afei sɛ yɛbɔ biribi ho mpae a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho adwuma. Yɛmfa no sɛ yɛabɔ mpae sɛ Yehowa mma yɛn nea yebedi da biara. Ɛnsɛ sɛ yɛbobɔ yɛn nsa tena hɔ twɛn sɛ Yehowa mma yɛn nea yehia nyinaa bere a yɛn ho yɛ den a yebetumi ayɛ adwuma. Ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden; ɛnsɛ sɛ yɛsa adwuma mu. (Mateo 6:11; 2 Tesalonikafo 3:10) Nhwɛso foforo ni: Yɛmfa no sɛ yɛwɔ suban bɔne bi, na yɛasrɛ Yehowa sɛ ɔmmoa yɛn mma yennyae. Biribiara a ɛbɛtwetwe yɛn ama yɛayɛ saa bɔne no, ɛsɛ sɛ yeyi fi yɛn akwan mu. (Kolosefo 3:5) Afei, ma yɛnhwɛ nsɛm bi a nkurɔfo taa bisa fa mpaebɔ ho.
NSƐM A NKURƆFO TAA BISA FA MPAEBƆ HO
9. Hena na ɛsɛ sɛ yɛbɔ no mpae? Dɛn na Yohane 14:6 ka fa mpaebɔ ho?
9 Hena na ɛsɛ sɛ yɛbɔ no mpae? “Yɛn Agya” a ɔwɔ soro no na Yesu kyerɛɛ n’asuafo no sɛ wɔmmɔ no mpae. (Mateo 6:9) Ɔsan kae sɛ: “Mene ɔkwan no ne nokware no ne nkwa. Obiara mma Agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so.” (Yohane 14:6) Wei kyerɛ sɛ Yehowa nko ara na ɛsɛ sɛ yɛbɔ no mpae, na Yesu so na ɛsɛ sɛ yɛde fa. Mpae a yɛde bɛfa Yesu so no kyerɛ sɛn? Yehowa de adwuma kɛse bi ahyɛ Yesu nsa. Enti ɛsɛ sɛ yenya obu ma ne gyinabea no na ama Yehowa atie yɛn mpaebɔ. Yɛahu sɛ Yesu baa asase so bewui sɛnea ɛbɛyɛ a yebenya ogye afi bɔne ne owu mu. (Yohane 3:16; Romafo 5:12) Afei nso, Yehowa apaw Yesu sɛ Ɔsɔfo Panyin ne Ɔtemmufo.—Yohane 5:22; Hebrifo 6:20.
Yebetumi abɔ Yehowa mpae bere biara
10. Sɛ yɛrebɔ mpae a, ɛsɛ sɛ yegyina ntenten anaa yɛyɛ biribi soronko? Kyerɛkyerɛ mu.
10 Sɛ yɛrebɔ mpae a, ɛsɛ sɛ yegyina ntenten anaa yɛyɛ biribi soronko? Dabi, Yehowa nkae sɛ yemmu nkotodwe, yennyina ntenten, anaa yɛntena ase ansa na yɛabɔ mpae. Bible kyerɛ yɛn sɛ yɛte hɔ oo, yegyina ntenten oo, sɛ nidi wom nkutoo a, yebetumi ne Yehowa akasa. (1 Beresosɛm 17:16; Nehemia 8:6; Daniel 6:10; Marko 11:25) Nea Yehowa pɛ ara ne sɛ yebefi obu mu ne no akasa, na ɛnyɛ gyinabea pɔtee bi. Yebetumi abɔ mpae wɔ yɛn tirim anaa yɛabɔ ama apue yɛn ano. Afei nso baabiara a yɛwɔ no, awia oo, anadwo oo, yebetumi abɔ mpae. Yɛbɔ mpae na sɛ obiara ante mpo a, Yehowa deɛ, ɔbɛte.—Nehemia 2:1-6.
11. Nneɛma bɛn na yebetumi abɔ ho mpae akyerɛ Yehowa?
11 Nneɛma bɛn na yebetumi abɔ ho mpae? Biribiara a ɛne Yehowa apɛde hyia. Bible ka sɛ: “Biribiara a yebisa sɛnea n’apɛde te no, otie yɛn.” (1 Yohane 5:14) Yebetumi abɔ nneɛma a yehia ho mpae anaa? Yiw. Sɛ yɛrebɔ Yehowa mpae a, ɛte sɛ yɛne yɛn adamfo paa rebɔ nkɔmmɔ. Nea ɛwɔ yɛn adwenem ne nea ɛda yɛn koma so nyinaa, yebetumi aka akyerɛ Yehowa. (Dwom 62:8) Yebetumi asrɛ no sɛ ɔmma ne honhom kronkron nhyɛ yɛn den na yɛatumi ayɛ nea ɛteɛ. (Luka 11:13) Afei yebetumi asrɛ Yehowa sɛ ɔmma yɛn nyansa a yɛde bɛbɔ yɛn bra. Yebetumi nso abɔ mpae na wama yɛn ahoɔden de agyina ɔhaw ano. (Yakobo 1:5) Yɛn bɔne nso, ɛsɛ sɛ yɛsrɛ Yehowa ma ɔde kyɛ yɛn. (Efesofo 1:3, 7) Ɛsɛ sɛ yɛkae afoforo nso wɔ yɛn mpaebɔ mu; ebi ne yɛn abusuafo ne yɛn nuanom a yɛne wɔn wɔ asafo no mu.—Asomafo Nnwuma 12:5; Kolosefo 4:12.
12. Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛma ɛho hia yɛn paa wɔ yɛn mpaebɔ mu?
12 Dɛn na ɛsɛ sɛ ɛho hia yɛn paa wɔ yɛn mpaebɔ mu? Ɛsɛ sɛ yɛma Yehowa din ne n’apɛde ho hia yɛn paa. Nea Yehowa ayɛ ama yɛn dɔɔso, na ɛsɛ sɛ yefi yɛn komam da no ase. (1 Beresosɛm 29:10-13) Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔkyerɛɛ n’asuafo no nea ɛsɛ sɛ wɔma ɛho hia wɔn paa wɔ wɔn mpaebɔ mu. (Kenkan Mateo 6:9-13.) Ɔkae sɛ yenni kan nsrɛ sɛ Onyankopɔn din ho ntew anaa ɛnyɛ kronkron. Afei nso, Yesu kae sɛ yɛmmɔ mpae na Onyankopɔn Ahenni mmra na Yehowa apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so. Sɛnea Yesu kyerɛ no, ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae bisa nneɛma a ehia yi wie ansa na yɛaba yɛn de so. Sɛ yɛde Yehowa ne n’apɛde di kan wɔ yɛn mpaebɔ mu a, ɛbɛkyerɛ sɛ ɛho hia yɛn sen biribiara.
13. Ɛsɛ sɛ yɛn mpaebɔ tenten yɛ sɛn?
13 Ɛsɛ sɛ yɛn mpaebɔ tenten yɛ sɛn? Bible nkyerɛ bere tenten a ɛsɛ sɛ yɛde bɔ mpae. Yɛn mpaebɔ betumi ayɛ tenten anaa tiatiaa; ne nyinaa gyina nea yɛrebɔ ho mpae no so. Yɛrebedidi sei a, yebetumi abɔ mpae tiatiaa. Nanso sɛ yɛde yɛn haw bi reto Yehowa anim anaa yɛreda no ase wɔ biribi ho a, yɛn mpae no betumi ayɛ tenten. (1 Samuel 1:12, 15) Ɛnsɛ sɛ yɛbɔ mpae tenten de pɛ nkamfo sɛnea ebinom yɛe wɔ Yesu bere so no. (Luka 20:46, 47) Yehowa ani nnye mpae a ɛte saa ho. Nea ehia Yehowa paa ne sɛ yebefi yɛn komam ne no akasa.
14. Mpɛn ahe na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae? Dɛn na wei ma yehu fa Yehowa ho?
14 Mpɛn ahe na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae? Yehowa ama yɛn kwan sɛ yɛne no nkasa bere nyinaa. Bible ka kyerɛ yɛn sɛ ‘monkɔ so mmɔ mpae,’ “munkura mpaebɔ mu denneennen,” “munnnyae mpaebɔ da.” (Mateo 26:41; Romafo 12:12; 1 Tesalonikafo 5:17) Yehowa wɔ hɔ ma yɛn daa; wayɛ aso sɛ obetie yɛn. Yebetumi ada Yehowa ase daa wɔ ne dɔ ne n’ayamye ho. Afei nso, yebetumi asrɛ no sɛ ɔnkyerɛ yɛn kwan, ɔnhyɛ yɛn den, na ɔmma yɛn awerɛkyekye. Sɛ yebu mpaebɔ sɛ hokwan kɛse a, yɛrentoto no ase koraa; yɛne Yehowa bɛkasa bere nyinaa.
15. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde “amen” wie yɛn mpaebɔ?
15 Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde “amen” wie yɛn mpaebɔ? “Amen” kyerɛ “ɛmmra mu” anaa “ɛnyɛ hɔ.” Ɛyɛ asɛm a yɛde kyerɛ sɛ mpae a yɛabɔ no yɛ yɛn ahiasɛm na efi yɛn komam. (Dwom 41:13) Bio nso, Bible kyerɛ sɛ, yehyiam na obi gyina yɛn ananmu bɔ mpae a, ɛbɛyɛ papa sɛ yɛka “amen” wɔ yɛn komam anaa yɛbɛka ama apue yɛn ano. Ɛno kyerɛ sɛ yegye nea ɔkae no tom.—1 Beresosɛm 16:36; 1 Korintofo 14:16.
SƐNEA ONYANKOPƆN TIE YƐN MPAEBƆ
16. Enti yɛbɔ mpae a Yehowa tie? Kyerɛkyerɛ mu.
16 Enti yɛbɔ mpae a Yehowa tie? Yiw. Bible frɛ Yehowa “mpaebɔ Tiefo.” (Dwom 65:2) Nnipa mpempem pii a wofi komam bɔ Yehowa mpae nyinaa, ɔnam akwan pii so tie wɔn.
17. Ɔkwan bɛn so na Yehowa fa abɔfo ne n’asomfo so bua yɛn mpaebɔ?
17 Yehowa tumi fa abɔfo anaa n’asomfo so ma yenya yɛn mpaebɔ ho mmuae. (Hebrifo 1:13, 14) Mpɛn pii na nkurɔfo abɔ mpae sɛ Onyankopɔn mmoa wɔn mma wɔnte Bible no ase. Wubehu ara na Yehowa Danseni bi akopue hɔ. Bible ma yehu sɛ “asɛmpa” a yɛreka wɔ wiase nyinaa no, abɔfo nso ka yɛn ho. (Kenkan Adiyisɛm 14:6.) Afei nso, yɛn mu pii wɔ hɔ a, yɛde yɛn haw anaa yɛn ahiasɛm bi ato Yehowa anim na ɔnam yɛn nua Kristoni bi so aboa yɛn.—Mmebusɛm 12:25; Yakobo 2:16.
Yehowa betumi afa yɛn nua Kristoni bi so abua yɛn mpaebɔ
18. Ɔkwan bɛn na Yehowa fa so de ne honhom kronkron ne Bible bua yɛn mpaebɔ?
18 Yehowa nam ne honhom kronkron so bua yɛn mpaebɔ. Sɛ yɛbɔ mpae sɛ ɔmmoa yɛn mma yennyina ɔhaw bi ano a, otumi de ne honhom kronkron kyerɛ yɛn kwan hyɛ yɛn den. (2 Korintofo 4:7) Wei da nkyɛn a, Yehowa nam Bible so bua yɛn mpaebɔ, na ɔde boa yɛn ma yɛreyɛ ade a, yɛde adwene to ho. Sɛ yɛkenkan Bible a, yetumi nya nsɛm bi a ɛbɛboa yɛn. Yehowa betumi nso ama onua bi ama mmuae wɔ Kristofo nhyiam ase anaa asafo mu panyin bi ne yɛn asusuw Bible mu asɛm bi ho na adi yɛn haw ho dwuma.—Galatifo 6:1.
19. Dɛn na ɛbɛma yɛanya adwene sɛ Yehowa ntie yɛn mpaebɔ?
19 Ɛwom, ɛtɔ da a yebebisa sɛ, ‘Adɛn nti na besi nnɛ Yehowa ntiee me mpaebɔ?’ Kae sɛ Yehowa nim bere a ɛsɛ sɛ otie yɛn mpaebɔ ne ɔkwan a ɔbɛfa so ayɛ ho adwuma. Onim nea yehia. Ɛtɔ da a, ebehia sɛ yɛbɔ mpae no kyɛ kakra. Ɛno bɛma Yehowa ahu sɛ nea yɛrebisa no no hia yɛn paa na yɛwɔ ne mu gyidi nso. (Luka 11:5-10) Ɛtɔ da a, Yehowa tumi fa kwan foforo koraa so tie yɛn mpaebɔ. Ebia na yɛaka yɛn haw akyerɛ no. Sɛ́ anka obeyi ɔhaw no afi yɛn so no, ɔbɛma yɛn ahoɔden mmom de agyina ano.—Kenkan Filipifo 4:13.
20. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛtaa bɔ Yehowa mpae?
20 Mpaebɔ yɛ hokwan kɛse a ɛma yɛne Yehowa kasa! Yɛwɔ awerɛhyem sɛ obetie yɛn. (Dwom 145:18) Sɛ yɛtaa ka yɛn komam asɛm kyerɛ Yehowa a, ɛbɛma yɛne n’adamfofa mu ayɛ den.
NOKWASƐM 1: YEHOWA PƐ SƐ OTIE YƐN MPAEBƆ
“Yehowa bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa, wɔn a wɔfrɛ no nokwaredi mu no.”​—Dwom 145:18
Sɛ yɛpɛ sɛ Yehowa tie yɛn mpaebɔ a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
Ɛsɛ sɛ yenya gyidi.
Ɛsɛ sɛ yenya obu ne ahobrɛase.
Nea yɛbɔ ho mpae no, ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho adwuma.
Yɛrebɔ mpae a, ɛnsɛ sɛ yɛfa asɛm baako na daa ɛno ara na yɛka. Mmom ɛsɛ sɛ yɛka yɛn komam asɛm.
Ɛsɛ sɛ yɛyɛ nea Onyankopɔn pɛ.
NOKWASƐM 2: NSƐM A NKURƆFO TAA BISA FA MPAEBƆ HO
Hena na ɛsɛ sɛ yɛbɔ no mpae?
Mateo 6:9; Yohane 14:6
Yɛrebɔ mpae a, ɛsɛ sɛ yegyina hɔ anaa yɛyɛ biribi soronko?
1 Beresosɛm 17:16; Nehemia 8:5, 6; Daniel 6:10; Marko 11:25
Yɛbɔ mpae wɔ yɛn tirim a, Yehowa te anaa?
Ɛsɛ sɛ yɛn mpaebɔ tenten yɛ sɛn?
Mpɛn ahe na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae?
Romafo 12:12; 1 Tesalonikafo 5:17
Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde “amen” wie mpaebɔ?
1 Beresosɛm 16:36; 1 Korintofo 14:16
NOKWASƐM 3: NNEƐMA A YEBETUMI ABƆ HO MPAE
“Biribiara a yebisa sɛnea n’apɛde te no, otie yɛn.”​—1 Yohane 5:14
Nneɛma bɛn na yebetumi abɔ ho mpae?
Bɔ mpae sɛ Yehowa apɛde nyɛ hɔ.
1 Beresosɛm 29:10-13
Bɔ mpae da no ase.
Bɔ nneɛma a wuhia ho mpae.
Bɔ mpae srɛ honhom kronkron.
Bɔ mpae srɛ nyansa a wode bɛbɔ wo bra.
Bɔ mpae srɛ ahoɔden na woatumi agyina ɔhaw ano.
Efesofo 1:3, 7
Bɔ mpae srɛ bɔne fafiri.
Asomafo Nnwuma 12:5
Bɔ mpae ma afoforo.
NOKWASƐM 4: YEHOWA TIE YƐN MPAEBƆ
“O mpaebɔ Tiefo, wo nkyɛn na ɔhonam nyinaa bɛba.”​—Dwom 65:2
Akwan bɛn na Yehowa fa so tie yɛn mpaebɔ?
Mmebusɛm 12:25; Adiyisɛm 14:6
Yehowa tumi fa abɔfo anaa n’asomfo so boa yɛn.
2 Korintofo 4:7
Ne honhom kronkron ma yenya mmoa a yehia.
Filipifo 4:6, 7, 13
Ɔma yɛn asomdwoe ne ahoɔden a yɛde begyina ɔhaw ano.
Galatifo 6:1; 2 Timoteo 3:16, 17
Ɔnam Bible ne asafo no so ma yɛn nyansa.